Ikhabhathi esecaleni kwamanzi yabucala eParadesi
Ikhabhinethi ayikho kwigridi ngokupheleleyo. Kukho izibane zelanga ngaphakathi nangaphandle kwekhabhinethi, i-sinki enejagi yamanzi amatsha, ifriji encinci ye-ice chest kunye ne-BBQ (i-propane ifakiwe). Ukuqubha kunye neetawuli zesitya, ilinen, izinto zokutya, izinto zokuthambisa, iiglasi, iimagi, ipani yentsimbi kunye nezixhobo zebbq ezibonelelweyo. Icoceke kakhulu, indlu yangaphandle esalwe ngesandla (indlu yangasese ye-dunny/drop) enezibane ezibengezelayo izinyuko nje ukusuka kwindlwana. Isitovu sokhuni kwindlwana yokugcina ubushushu ngobusuku obubandayo kunye neenkuni ezinikezelweyo.
Amanzi okusela amatsha, iithotshi, amakhandlela, iinkuni zomlilo ezibonelelweyo. Lala ebhedini kwaye ujonge echibini kwifestile yomfanekiso ukusuka ebhedini yakho yobukhulu bokumkani. Ikofu, iti, itshokolethi eshushu kunye neswekile iyancomeka.
Kukho izinja ezi-4 ezinkulu, ezinobubele kakhulu ezigcina imfuyo kwipropathi ezulazula simahla 24/7 ukukhusela imfuyo ngoko ke ayifanelekanga izilwanyana zasekhaya okanye abantwana abangakhatshwanga.
Iindwendwe zinendawo yazo engasemanzini / elwandle, indawo yomlilo enezitulo kunye netafile yepikiniki. Iphenyane, amaphini okubhexa kunye neebhatyi zobomi ezi-2 zibonelelwe ngendlela encomekayo. Ii-snowshoes ezibonelelwe ebusika zincoma ukuhamba. Sigcina irenki yokutyibiliza icocekile bonke ubusika ukuze isetyenziswe ziindwendwe.
Umqondiso weselula ofanelekileyo kwindawo yekhabhinethi. Iindawo zombane ezifumaneka ekhitshini lokutshaja izixhobo.
Sineenkomo, iigusha, iibhokhwe, iihagu, izinja zemfuyo, iikati ezingoovimba, iinkukhu, amadada, iintakumba, amahashe kunye needonki ezityiswe kwezinye iindawo zepropathi. Wonke umntu kakhulu, friendly kakhulu kwaye uyonwabele ingqalelo yeendwendwe. I-emele yeetyhubhu ze-alfalfa inikezelwe ukondla izilwanyana. Ngokuqhelekileyo kukho into efakwe kwibhotile (siyakuthanda ukuthatha izilwanyana zokuhlangula) iindwendwe zamkelekile ukuba zithathe inxaxheba. Iindwendwe zikhuthazwa ukuba zijikeleze kwaye zidibanise nezilwanyana, nceda uvale amasango emva kwakho kwaye uhloniphe indawo yentsapho yangasese kufuphi nekhaya lethu.
Sixakekile efama kodwa siyafumaneka ukukunceda ukuba uyalufuna. Kukho umqondiso weseli endilisekileyo kwaye sifumaneka ngokubhaliweyo ixesha elininzi